इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:7तरीका यो गर्न 🥇
डाउनलोड गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम भिडियोहरू:7यसलाई गर्ने तरीकाहरू
इन्स्टाग्राम भिडियोहरू एक तरीकाले हामी सबै हाम्रो लोकप्रियता अनलाइन मापन गर्न सक्छौं, वा छैन। ¿Qके हुन्छ यदि तपाईं इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, साझेदारी गर्नुहोस् र उनीहरूको खाली समयमा हेर्नुहोस्?
यो तपाईंको साथीहरूबाट अविश्वसनीय सिर्जनाहरू वा गुणवत्ता सामग्री हो, इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्न धेरै सजिलो छ। केवल तल दिइएका विधिहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुहोस् र यी सामग्रीहरू अहिले पाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई पनि बताउँछौं कसरी अधिक अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने.
1 इंस्टाग्रामका लागि भिडियो डाउनलोडर
मा उपलब्ध: एन्ड्रोइड
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले को लागी धेरै विशेष अनुप्रयोगहरू पाउन सक्छन् गुगल प्ले स्टोरमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् (गुगल प्ले स्टोर प्रयोग गर्नका लागि सल्लाहहरू)
सबैभन्दा लोकप्रिय मध्येको एक भिडियो डाउनलोडर हो इन्स्टाग्राम। यसले तपाइँलाई डाउनलोड मात्र गर्न वा केवल एक टचको साथ इन्स्टाग्राम भिडियोहरू पुन: प्रकाशित गर्न अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगले भिडियोहरू सँगै ट्यागहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्दछ।
डाउनलोड गरिएको सामग्री स्वचालित रूपमा तपाईंको फोनको ग्यालरी अनुप्रयोगमा थपियो।
मा उपलब्ध: एन्ड्रोइड, आईओएस, वेब
के तपाइँ तपाइँका सबै इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ? वा हुनसक्छ तपाईंको मनपर्ने इन्स्टाग्राम भिडियोहरू बचत गर्नुहोस्? तपाईं IFTTT एप्लेट कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लेटले काम गर्नका लागि तपाईलाई IFTTT खाता, एक इन्स्टाग्राम खाता रaचाहिन्छ ड्रपबक्स.
नतीजा एक स्वचालित प्रक्रिया हो जसमा तपाइँले थप्न वा मनपराएको कुनै पनि इन्स्टाग्राम भिडियो स्वचालित रूपमा डाउनलोड गरिएको छनोट गरिएको ड्रपबक्स फोल्डरमा थपिन्छ। यो भन्दा सजिलो के हुन सक्छ?
मा उपलब्ध: वेब
PostGraber धेरै अन्य वेब आधारित इन्स्टाग्राम डाउनलोड उपकरणहरू भन्दा फरक छ। जबकि तिनीहरू मध्ये अधिकांश केवल प्रति पोष्ट सामग्रीको एक टुक्रा क्याप्चर गर्न सक्दछ, PostGraber सबै फोटो र भिडियो डाउनलोड गर्न सक्दछ जुन एकल पोष्टसँग सम्बन्धित छ।
तपाईलाई चाहिने सबै डाउनलोड गर्न चाहेको इन्स्टाग्राम पोष्टको URL हो। तपाईं मोबाइल अनुप्रयोगमा गएर यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस्, वा वेब अनुप्रयोगमा ब्राउजर ठेगाना पट्टीबाट।
URL लाई PostGraber वेबसाइट बक्समा टाँस्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् Ir। वेब अनुप्रयोगले बाँकीको हेरचाह गर्नेछ।
नोट: यो अनुप्रयोग सार्वजनिक इंस्टाग्राम पोष्टहरूमा मात्र काम गर्दछ।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि इन्स्टाग्रामले तपाइँको व्यवसायको लागि के गर्न सक्दछ?
ड्रेडाउन, जुन अझै पनी यसको अघिल्लो नाम, Instadown द्वारा सन्दर्भ गरिएको छ, इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्न मूल उपकरणहरू मध्ये एक हो, र अझै कार्यान्वयनमा छ।
PostGraber जस्तै, सबै Dredown लाई काम गर्नु आवश्यक छ URL हो। URL लाई बक्समा टाँस्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् Dredown । केहि सेकेन्डमा तपाईको ब्राउजरले MP4 फाईल डाउनलोड गर्न सुरू गर्नेछ।
Dredown मात्र इन्स्टाग्राम भन्दा बढी सेवाहरूको साथ काम गर्दछ। तपाईं यसको प्रयोग युट्यूब, फेसबुक, कीक, ट्विटर, ट्विच, भिनो, भिमेओ, मेटाकाफे, भेभो, कोहतकटे र टम्ब्लरबाट सामग्री डाउनलोड गर्नका लागि पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसले समर्थन गर्ने सबै सेवाहरूको लागि तपाईंलाई प्रकाशनको भिडियो, भिडियो वा फोटो मात्र बचत गर्नुपर्दछ।
आईओएस मा उपलब्ध:
ठीक छ, त्यसैले हामी एन्ड्रोइड र वेब अनुप्रयोगहरू कभर गरेका छौं। तर कसरी आईओएस मा इन्स्टाग्राम भिडियो डाउनलोड गर्ने?
ठिकै छ, अनुप्रयोग स्टोरमा धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने क्षमता हो भनेर दाबी गर्दछन्, तर तिनीहरू अनुप्रयोग भित्रका विज्ञापनहरू र खरीदहरू प्राय: पूर्ण हुन्छन् र प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ।
एक अपवाद Regrammer हो। अनुप्रयोग पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ र, यद्यपि यो विज्ञापनद्वारा समर्थित छ, विज्ञापनहरू त्यति कष्टप्रद छैनन्।
फेरि एकचोटि, तपाईंलाई इन्स्टाग्राम भिडियोको URL आवश्यक पर्दछ जुन तपाईंले काम गर्न अनुप्रयोगको लागि डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ। जब तपाईंसँग यो हुन्छ, रेग्रामर अनुप्रयोग खोल्नुहोस्, यूआरएल टाँस्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् पूर्वावलोकन .
अन्तिम पृष्ठमा, तपाईं आफ्नो उपकरणमा भिडियो डाउनलोड गर्न वा यसलाई आफ्नै नामले पुन: प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड गर्नुहोस्: रेग्रामर (नि: शुल्क)
6 OG इन्स्टाग्राम
OG Instagram Google Play Store मा छैन। यसलाई तपाईंको हातमा राख्न तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ।
एप्लिकेसन एन्ड्रोइडमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड र बचत गर्ने एक तरीका मात्र होईन, यसमा सबै प्रकार्यहरू पनि छन् जुन तपाईंलाई ह्यासट्यागलाई अनुसरण गर्न, समान उपकरणमा दुईवटा खाताहरू प्रयोग गर्न, प्रयोगकर्ताहरूको प्रोफाइल चित्र हेर्न (लामो प्रेस), र बाह्य अनुप्रयोगहरूमा URL हरू साझेदारी गर्नुहोस्।
डाउनलोड गर्नुहोस्: OG Instagram (नि: शुल्क)
हामी तपाईंलाई अर्को एउटा वेब अनुप्रयोगको साथ छोड्दछौं। तपाईका आर्सेनलमा इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्न केहि वेब अनुप्रयोगहरू राख्नु सधैं बुद्धिमानी हुन्छ, किनकि तिनीहरू प्राय एक पटक दुई दिनको लागि डाउनलोड गर्दछन्।
अब सम्म, तपाई सेवा को उपयोग गर्न को लागी प्रक्रिया बाट परिचित हुनुहुनेछ। तपाईंले चाहानुभएको भिडियो वा छविको URL पाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई ग्रेम्ब्लास्ट वेब अनुप्रयोगमा टाँस्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड गर्नुहोस् .
फाइल आकारमा निर्भर गर्दै, तपाईंसँग एक सेकेन्डमा एक नयाँ MP4 तपाईंको कम्प्युटरमा हुनुपर्दछ। तपाईं भिडियोलाई बिभिन्न सामाजिक नेटवर्कमा पुन: लोड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको हार्ड ड्राइभमा बचत गर्नुहोस् ताकि तपाईं यसलाई पछि जाँच्न सक्नुहुन्छ।
इन्स्टाग्राम भिडियोहरूको प्रतिलिपि अधिकार सम्झनुहोस्
यो सजिलो छ इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको भिडियोमा अधिकार छैन।
हो, तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईं तिनीहरूलाई रमाउन सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरूलाई तपाईंको आफ्नै रूपमा अपलोड नगर्नुहोस्, वा तिनीहरूलाई कुनै पनि अन्य तरिकामा वितरण गर्नुहोस्, विशेष गरी उचित क्रेडिट नदिई। तपाईं चाहानुहुन्न कि तिनीहरूले पनि तपाईलाई त्यस्तै गरून्।
इन्स्टाग्राम भिडियो डाउनलोड गर्ने अन्य तरिकाहरू
यदि यी सात अनुप्रयोगहरूले परिणाम दिउँदैनन् जुन तपाईं इन्स्टाग्राम भिडियोहरू डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ केहि थप विधिहरू छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, तपाई जेनेरिक अनुप्रयोगहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईलाई वेबसाइटहरु बाट स्ट्रिमि videos भिडियो डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। भिडियोग्राबी, भिडियो डाउनलोडहाल्पर र फ्रिमेक भिडियो डाउनलोडर यस विभागमा सबै ठोस विकल्पहरू छन्।
तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ इन्स्टाग्राम कथाहरूमा तथ्या .्क.
कसरी ईन्टरनेट मार्केटिंग तपाइँको कम्पनी को मान्यता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ
इन्टरग्राम एनालिटिक्स मेट्रिक्स र परिप्रेक्ष्यको साथ मार्गदर्शन गर्दछ